फुर्सदका कुरा: ऋण लागोस्, दिन नलागोस् | चितवन पोष्ट दैनिक
फुर्सदका कुरा: ऋण लागोस्, दिन नलागोस्
२०७० मंसिर ८, शनिबार ०४:०२ गते
यो शीर्षक नेपाली चर्चित उखानबाट साभार गरिएको हो । यो उखान त्यसै बनेको होइन । यसको अर्थ प्रिय पाठकहरुलाई अवगतै छ । अहिले देशभर चुनावी नतिजाको रन्को छ । कोही नतिजाबाट रन्किएका छन्, कोही रन्थनिएका छन् । चुनावी माहोलदेखि मत परिणामको श्रृंखलासम्म आइपुग्दा धेरैलाई अनिद्रा, अपच, ग्यास्टिकसँगै ‘ब्लडप्रेसर हाई’ भएको छ । कति जना त फेन्टसमेत भए, हार्ट एट्याक्टसम्म नहोला भन्न सकिन्न । तर, कसैलाई त्यसो नहोस् । श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन् ।
एकथरी रमाइलोमा पञ्चेबाजासहित विजय जुलुस निकालिरहेछन् भने अर्काथरी मत परिणाम अस्वीकार गर्ने धम्कीसहित यो जाडोमा ‘चिसो’ पिइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धामा कुनै एक उम्मेदवार विजयी हुने हो । अरुले नचाहेरै पनि हारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, यही सत्य आत्मसात् गर्न पनि कति गाह्रो हुँदोरहेछ । मर्न बरू गाह्रो हुन्न… हार पचाउन त्यति गाह्रो हुँदोरहेछ । सामुदायिक वनको चुनाव हार्दा त निद्रा लाग्दैन भने संविधानसभामा हार्दा पीडा हुनु स्वाभाविक नै हो । हार्नेहरुले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि हिँड्ने मान्छेमात्र लड्छ । अर्को चुनावमा भारी मतले विजयी हुन पनि सकिन्छ । चुनावी नतिजामा पराजित भएपछि हँसिलो मुहार पनि निचोरिएको कागतीजस्तो हुँदोरहेछ । अनि पो बूढापाकाहरुले भन्दा रै’छन्– ‘के चुनाव हारेको नेताजस्तो मुख लगाएर हिँडेको ?’
नेपालमा जे भइरहेछ वा हुन्छ, त्यो कल्पनै गर्न सकिँदैन । त्यसै भएर होला, एक से एक भविष्यवेत्ताहरु फेल खान्छन्, राजनीतिक विश्लेषकहरुसमेत तीनछक खान्छन् । मेरो गोरूको बाह्रै टक्काजस्तो सबै क्षेत्रमा आफ्नै पार्टीले जित्नुपर्ने र सधैँ जनताले जिताइदिएर सत्तामा पु¥याइदिने काम हुँदोरहेनछ भन्ने कुरा अब नेताहरुले सिक्लान् भन्ने लागिरहेको छ । हामी मतदाताले त इच्छामात्र राख्ने हो, भगवान्को वरदान पाएकाहरुले के–के गर्लान्, त्योचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । आफू भलो त जगत् भलो भनेर सोच्ने नेताहरुले देश र जनताका लागि सोचेका भए पहिले नै संविधान बनिसक्थ्यो । जनतालाई सताएर, जनताकै मत खाएर, जनताको इच्छाअनुसार काम नगर्नेलाई जनताले राम्रै झड्का दिँदारहेछन् भन्ने कुरा नेताहरुले गिदीमा छिर्नसके जाती नै हुँदो हो । त्यस्तो गम्भीरता प्रदर्शन देखाउने आँट कसको छ र ?
नेपाल थरीथरीका विविधता बोकेको देश हो । यहाँ राजनीतिक विविधताको त कुरै नगरौँ । नेपालमात्रै यस्तो देश होला, जहाँ १ सय ३९ वटा त राजनीतिक दल नै छन् । त्यसमा पनि राजनीतिक विश्लेषक हुनलाई त नेपालमा कुनै योग्यता र मापदण्ड नै चाहिँदैन । त्यसमध्ये नेताहरु आफैँ मनगढन्ते विश्लेषक हु्न् जसले आफू, आफ्नो दल र दलमा आस्था राख्नेबाहेक सबैलाई वैरी नै सोच्छन् । भोट दिन पनि घुर्कीसहित आग्रह गर्छन्, पाएको भोटको कदर गर्नु त कता हो कता भोट कम आउनै नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । जनताले कति रूचाएका छन्, कतिसम्म विश्वास गरेका छन्, त्यो विचार गर्न उनीहरुसँग समय नै बाँकी छैन । जनमतको सम्मान गर्नु त परै जाओस्, तिनै जनतालाई खिन्न तुल्याउँछन् ।
जसको शक्ति उसकै भक्ति भनेझैँ अहिले चुनावको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक हुँदाहुँदै कति व्यक्तिहरु भटाभट शक्तिको पछाडि दौडिरहेछन् । कसैले फेरि चुनाव हुन्छ भनेर आँकलन गरिरहेछन् । कतिपय शान्तिविरोधी त¤वहरु फेरि हिंसा मच्चिन्छ भनेर आमजनतालाई आतंकित बनाइरहेका छन् । चुनाव बहिष्कार र मत बहिष्कारवादीबीच एकता हुन्छ भनेर कतिपय धूप बालेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । मान्छेको जात कतिसम्म स्वार्थी हुँदोरहेछ भने जसको जित हुन्छ उतै लहसिने, उसैको झन्डा बोकेर ¥यालीमा सरिक हुने । लाजै पचाएर जित्नेवालाको पार्टी खाने ।
अहिले मतदाताको ध्यान खाजा–खानाभन्दा पनि चुनावको नतिजामा नै केन्द्रित भइरहेको छ । हाम्रो दुईतिहाई आउँछ भनेर बाजी थाप्नेहरुको नाकमुख नदेख्दा भने म आश्चर्यमा परिरहेको छु । पहिले तीन हातमाथि उफ्रिएर हावादारी विश्लेषण गर्नेहरु नतिजा यसरी पल्टिन्छ भन्ने त सपनामा पनि सोचेका थिएनन् होला । अहिले देशभर यही नतिजाको विषयमा बहस सुरू भइरहेको छ । कोही हार्दा कोही मात्नुपर्ने, कसैले जित्दा कोही तात्नुपर्ने ! कस्तो अनौठो प्रचलन छ हाम्रो । मानौँ, यो देश जित्नेहरुको मात्र हो, हार्नेहरु सबै आप्रवासी हुन् । जनता मतदातामात्र हुन् । मतदान गर्नेभन्दा अरु केही अधिकार जनतालाई छैन ।
हिजोसम्म पानीसमेत बाराबार गर्नेहरु मत परिणाम आउँदा नआउँदै एकैसाथ पिकनिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् । चुनावमा न्यूट्रल भूमिकामा बस्ने र साझा कार्यकर्ता बन्नेहरु अहिले धुरीमा झन्डा राख्न हौसिएका छन् । अहिले देशविदेशमा रहनेहरुले खबरभन्दा पनि पहिले मत परिणाम सोध्ने गरेका छन् । कसैका लागि केही चासो छ भने त्यो मत परिणामकै छ । केहीमा रूचि छ भने नतिजामै छ । सञ्चारकर्मीदेखि अधिकारकर्मीसम्म, नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबै तीनछक खाएका छन् ।
आखिर मत परिणाम कसैको खल्तीको कुरा होइन रहेछ । मतदाताको मनको कुरा थाहा पाउन र मत आँकलन गर्ने कुरा साँच्चै नै कठिन कार्य रहेछ । ‘डमी’ उम्मेदवारका रुपमा उठाइएकाहरुलाई त जिते पनि हारे पनि केही मतलब छैन । जसले करोडौँ खर्चेका छन्, तिनलाई कति चिन्ता लाग्दो हो । घरपरिवार, व्यापार–व्यवसाय सबै छाडेर होमिएका र पुख्र्याैली सम्पत्ति बेचेर चुनाव लडेका हस्तीहरु पराजित भए भने उनीहरु कसरी व्यवस्थापन होलान्, मलाई भने यसैमा चिन्ता लागेको हो । पैसा खर्च गरेर पनि मत नझर्ने रहेछ । जनतालाई भेँडाबाख्रा नै सम्झनेहरु अहिले आफैँ भेँडाबाख्राको अवस्थामा छन् । केही छैन, ऋण लागोस् तर दिन नलागोस् । ऋण लागे तिर्न सकिएला नत्र देखा जाला । दिन लाग्यो भने अरबौँको सम्पत्ति भए पनि के अर्थ हुन्छ र ?
जुन पार्टीले जिते पनि संविधान बनोस् भन्नेमात्र चाहना हो । कोही नबर्बराऊन्, कोही नबहुलाऊन्, कोही नचिढियून्, कसैलाई पनि हरूवाको ट्रेडमार्क नलागोस् । पहिलेको संविधानसभामा हरूवाको ट्रेडमार्क लगाएकाहरुले अहिले नतिजा उल्ट्याइदिएका छन् । चुनावमा हारजितभन्दा पनि जित्नेहरुलाई कति चुनौती छ, त्यो पनि ख्याल राखौँ । अन्तिम परिणाम नआउन्जेल मुख कालो बनाएर, निद्रा मारेर, घरभित्रै गुप्तवास बस्नुपर्ने अवस्था छैन । शानले हिँडौँ । आँधीहुरी सधैँ आउँदैन । जब आउँछ, त्यसले आफ्नो र अर्को केही भन्दैन । चुनावी प्रकोप पनि दैवी प्रकोपजस्तै हो । बाढीजस्तै हो– कहिले कहाँ आउँछ, कहिले कहाँ । जनता कसैका होइनन्, सबैका हुन् । जनतालाई सम्मान गरे जनताले पनि त्यसको गुन तिर्छन् ।
अहिले नानाथरीका थाङ्ने विश्लेषकहरुले थाङ्ने गफ गरेर समयको सदुपयोग गरिरहेका छन् । ऐतिहासिक मानिएको संविधानसभामा सबै दलका नेताले जनता, सरकार, निर्वाचन आयोगलाई गच्छेअनुसार सम्बोधन गरेर धन्यवाद दिँदै इतिहासमै सर्वाधिक कीर्तिमान मत खसेको, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रहेको भन्न कसैले छुटाएनन् । सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियामा प्रतिक्रिया दिएको चौबीस घन्टा पनि नबित्दै तिनैको मुखबाट धाँधली, षड्यन्त्र र ग्रान्ड डिजाइन गरिएको भन्दै विरोधको वर्षा भइरहेछ । यस्तो सुन्दा लाग्छ, यो चुनाव सबैभन्दा ठूलो जुवा पो रहेछ । यो देशका जिम्मेवार ठानिएका नेताहरु महान् जुवाडे पो रहेछन्् । तर, हरेक खेलमा आ–आफ्नै नियम हुन्छन् । जुवा होस्, म्यारिज होस, फुटबल, क्यारेमबोर्ड या लुँडो नै किन नहोस्, हार्ने संकेत देखिएपछि विपक्षी खेलाडीले झेली खेल्न थाल्छ । म्यारिजमा जितुन्जेल कोही बोल्दैन । एकोहोरो हार्न थालेपछि तास चोरिएको, माल फेरिएको आरोप लगाइन्छ । फुटबलमा पनि त्यस्तै हो, हार्नेले बढी छिर्कने लगाएर पछार्न खोज्छ अर्थात् फल्ट खेल्छ । क्यारेमबोर्डमा आफूखुसी नियम लगाउन खोज्छ । प्रतिस्पर्धामा नजित्ने देखेपछि गोटी नै चोर्ने खेल रचिन्छ । त्यो त हामीले हरेक खेलको अनुभव सँगालेकै छौँ । हरूवा खेलाडीको उत्तेजना महसुस गरेकै छौँ । राजनीतिक खेल पनि सकारात्मक नतिजा नआएपछि नीतिविहीन हुँदोरहेछ ।
चिया गफका क्रममा भर्खरै ताजा कुरा थाहा पाइयो । कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पार्टीका मतदाताले मतपेटिकामा पैसाको नोटसहित खसालेका थिए रे । मत गणनामा त्यो नोटै गायब भो रे । त्यो हजारको नोट चोर्न विपक्षी दलले ‘हेलिकप्टर चार्टर’ गरेर आकासमाथि नै मतपेटिका गायब गरेर मिलेर पार्टी खाए रे । कता हो मतपेटिका बोकेको गाडी नै गायब भो रे । त्यो गाडी अहिले कुन देशमा पुगेको होला ? कि बोइङ जहाजै ल्यान्ड गरेर त्यसैमा राखेर गायब बनाइयो रामजाने ! कुनचाहिँ कार्यकर्ताले हो, चुनावचिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्ने ठाउँमा हुलाक टिकट टाँसेका थिए रे । टिकटको लोभले निर्वाचन अधिकृतले नै मतपत्र परिवर्तन गरे रे । कसले हो, मतपत्रमा टप नै टाँसेका थिए रे । सुनको लोभमा मत बाकस नै परिवर्तन भो रे । एक जना कार्यकर्ताले त उम्मेदवारको छोरीलाई लभलेटरै लेखेर खसालेका थिए रे । मतगणनास्थलमा त्यसको बडो चर्चा भो रे । यस्ता चिया गफहरु सुनेर म त वाक्कै भैसकेर तपाईंलाई पनि सेयर गरेको हुँ । तैपनि, यसपालिचाहिँ मैले यतिवटा भोट हालेँ भनेर घमण्ड गर्ने, प्लास्टिकको नङ लगाएर गाउँलेको नाममा भोट खसालेको सुन्नु परेन । बरू, पहाडघरतिर मतदान गर्न नै पाइएन, बाटो नै अवरोध भयो भन्नेचाहिँ सुनेको हो । सुनेको कुरामा विश्वास गर्ने हो भने त सबै ठाउँमा पुनः मतदान गर्नुपर्छ । कि कसो ?
निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र लागू गरेर कहीँ नभएको नियम बनाएपछि स्वर्गवासीको नाममा मतदान गर्न नपाएर कति मत घाटा भो । विदेशमा रहेकाहरु घर नआइदिनाले उनीहरुको नामको मत पनि खेर गयो । अहिले भोट हाल्न पाइनँ भनेर परदेशिएका मित्रहरुले गुनासो मात्र पोख्छन् । देशमा नहुनु भइसक्यो, अहिले थकथक मानेर के अर्थ ? अब संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ विदेशबाटै इलेक्ट्रिक मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ । अब त एनआरएनएले पनि पहल गर्ला, यसमा के टाउको दुखाउनु ? सय प्रतिशत नै भोट खस्न सक्यो भने बल्ल वास्तविक परिणाम आउँछ । जाबो ७३ प्रतिशत पनि कुनै मत हो र ?
परीक्षा दिएपछि कि पास भइन्छ कि फेल । परीक्षामा कस्तो गरिएको छ, नतिजा त्यस्तै आउँछ । अहिले साना तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु आफ्नो भोट असाध्यै थोरै आएकोमा चित्त दुखाउँदैछन् । एक उम्मेदवारले त मलाई हाकाहाकी नै भने, तपाईंले एक भोट दिनुभएको भए मेरो मत ‘सय’ पुग्नेथियो । कोहीले भन्छन्– मैले पैसा खर्च गर्न नसकेर कम मत आएको हो । मेरा पार्टी खाएकाहरुले, मेरा झन्डा बोकेर हिँड्नेले समेत मलाई भोट हालेनन् । क–कसले धोका दिए, एक–एक नाम मसँग छ भनेर कुर्लिंदै थिए रे । खर्च गर्ने बेलामा आँखा नदेख्ने, अनि भोट हालेनन् भनेर चित्त दुखाएर के फाइदा छ र ? दुःखमा नआत्तिनु सुखमा नमात्तिनु भन्ने बूढापाकाको भनाइलाई आत्मसात् गर्दै अहिले मत जे–जस्तो आए पनि परिणाम स्वीकार गरेर सबै शक्ति मिलेर लोकतान्त्रिक संविधान बनाऊन् । फेरि पनि उही पारा भयो भने के थाहा, नयाँ शक्ति र विकल्प जनता आफैँले रोज्नेछन् । नेपाली जनता जिन्दावाद !